Dukaanka IKEA oo Shaqaalihiisa Gudoonsiiyay Lacag Gaareysa 1 Bilyan, Shaqadooda Xiliga Corona
HomeWararka CaalamkaDukaanka IKEA oo Shaqaalihiisa Gudoonsiiyay Lacag Gaareysa 1 Bilyan, Shaqadooda Xiliga Corona
October 31, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Denmark, Wararka Finland, Wararka Maanta, Wararka Norway, Wararka Sweden 0
Shirkadda weyn ee alaabta guryaha ee Sweden (IKEA) ayaa go’aansatey in ay bixiso gunnooyin qiimihiisu yahay 1.1 bilyan krone (110 milyan oo Yuuro) dhammaan shaqaalaheeda adduunka oo dhan si ay ugu mahadceliso uguna qaddariso inta lagu jiray xilliga cudurka Corona, iyo aqoonsiga “dadaalkooda xoogga leh” xilli adag.
Ulrika Bezert, oo ka mid ah mas’uuliyiinta Dukaanka ayaa tiri: oo uga Mahadcelisay Shaqaalaha Dadaalkooda.
Waxayna intaa ku dartay, “Shaqaalaha nala shaqaynaya waa geesiyaasha u soo jiheeyay shirkadeena si ay ugu adeegaan macaamiisha sida ugu macquulsan.” Dukaanka waxa uu shaqaaleysiiyay in ka badan 170,000 oo qof waxayna laamo ku leeyihiin 32 Wadan oo adduunka ah.
Gunnada waxaa loo qaybin doonaa dhammaan shaqaalaha 31ka Agoosto kuwaas oo ku jira booskooda ilaa taariikhda lacag bixinta ee Janaayo 2022. Saamiyada la bixiyo ayaa ku kala duwan suuqyada kala duwan. Gunnadan waxaa lagu daraa gunnada sannadlaha ah ee ay bixiso shirkadu iyadoo lagu saleynayo heerarka